Baarlamaanka Koofur Galbeed oo muddo kordhin u sameeyay Madaxweyne Lafta Gareen – Kalfadhi
Xildhibaannadda Baarlamaanka dowlad-gobolleedka Koonfur-Galbeed, oo shalay yeeshan kulan ajandihiisu uu ahaa mooshin muddo xileedka madaxwweynaha loogu kordhinayo muddo hal sanno ah.
Xildhibaanno gaaraya 30 mudane ayaa horray usoo jeediyay mooshinka, kaas oo ugu dambeyn la keenay kulankii Baarlamaanka ee uu shir-guddoominayay Guddoomiyaha Baaralamanka Dowlad Goboleedka KGS Dr. Ali Siciid Fiqi iyo labadiisa ku-xigeen.
Kulanka oo ay soo xaadirtay 87 mudane, ayaa intaasi kaddib la guda-galley ka doodida mooshinka, iyadoona mooshinka ay ansixiyeen 87 mudane, mana jirin xildhibaan ka aamusay ama diiday, sida uu ku dhawaaqay Guddoomiyaha Baarlamanka Dowlad Goboleedka KGS Dr. Ali Siciid Fiqi.
Xildhibaanada ayaa si aqlabiyad leh u meel mariyay muddo kordhinta Madaxweynaha Koofur Galbeed oo hal sano ah, iyadoo dhamaadkii sanadkii 2018 loo doortay xilkaas.
Muda xileedka Madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo Xildhibannadda ayaa hadda ah mid is-waafaqay kaasi oo ku’eg 2024-ka.